China Posture corrector J09 Manufacture and Factory | Hongzhu
Material Neoprene, Nylon Neoprene
asa Mampitolagaga, fanitsiana ny lamosina
endri-javatra Mifoka rivotra, mateza
Color Mainty, manga, mena, na namboarina
Famantarana Logo voafaritra
Ny braces postural dia tokony hitafy mandritra ny 3-4 ora isan'andro. 15-25 minitra fotsiny ihany, avy eo ampio 20 minitra isan’andro. Ny lamosinao sy ny sorokanao dia hovana tsikelikely, ary hanorina fahatsiarovana hozatra ianao amin'ny endrika tokony ho haingo. Fadio ny fametahana tafahoatra mba tsy hisian'ny fihenjanana be loatra. Tsy mety ny manao akanjo lava hanohanana mandritra ny fotoana maharitra. Azo ampiasaina ho fitaovana fiofanana ihany izy ity hanampiana anao hamerenanao ny toerana misy anao. Ny mpanitsy ny posture dia tsy natao hoentina, noho izany dia manao ratsy kokoa noho ny tsara izy ireo. Ny fanampiana miverina amin'ny fanitsiana miaraka amin'ny banga lumbar dia manampy amin'ny fanamaivanana amin'ny ratra ary mihazona hatrany anao. Nasaina hanamaivana ny fanaintainan'ny fihenjanana ambany, sprain ary hozatra. Ity brace posture mampahazo aina ity no fomba mahomby indrindra hisorohana ny fanaintainana sy ny fanaintainan'ny aretina miaraka aminy. Ireo fehin-kibo sy fehin-kibo dia azo ampiharina tsara, manome anao ny hakana amin'ny famolavolana vatanao mba hahazoana fampiononana tsara indrindra, izay ilazana anao hitafy ao anaty undershirt. Matoky izahay fa ho tia an'io vokatra io ianao ary manantena fa hanana izany haingana kokoa ianao, tsy afa-po amin'izany na akanjo vita amin'ny landihazo.
Previous: Mpitam-paositra J05
Manaraka: Mpitam-paositra J10
Miverina amin'ny mpiambina posture brace
Averin'ny mpiambina posture
Body postur corrector
Fitaovana mpanitsy posture
Posture corrector ho an'ny ankizy
Mpitandrina posture ho an'ny vehivavy